အင်းလေးကန်ရေဝေရေလဲဒေသထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေအသုံးချမှုစနစ်ကျမှန်ကန်စေရေးနှင့် ပြည်သူဗဟိုပြုဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့သစ်တောလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်မောင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၀
ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်သည် လူသားတို့အပါအဝင် သက်ရှိအပင်နှင့် သတ္တဝါတို့ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးအတွက် အထူးအရေးပါသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် ရေအရင်းအမြစ် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်ကာလ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမူဘောင်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပသည့်သတင်း
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၀၈:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် Smithsonian Institution (SI) ၊ United Nations Development Programme (UNDP) ၊Green Economy and Green Growth (GEGG) တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်ကာလ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ မူဘောင်ရေးဆွဲရေး နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်း အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် သစ်ထုတ်ကုမ္ပဏီများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသတင်း (၁၂-၃-၂၀၁၄၊နေပြည်တော်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် သစ်တောများရေရှည် တည်တံ့ပြီး သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ် ရမည့် ပမာဏကို စနစ်တကျ တွက်ချက်သတ်မှတ်၍ နှစ်(၃၀)သစ်တောကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း၊ (၅) နှစ်စီမံကိန်းတို့ဖြင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် လျာထားချက်များချမှတ် ထုတ်လုပ်စေ လျက်ရှိပါသည်။
မုတ္တမပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်ပေါ်ထွန်းလာသည့် ကမ်းတက်မြေနေရာများတွင် ဖြစ်ထွန်းနေသည့် ဒီရေတောများထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဒုတိယဝန်ကြီးဦးအေးမြင့်မောင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ
ရေရှည်တည်တံ့သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒီရေတောများအပါအဝင် ကမ်းရိုးတန်းဂေဟ စနစ်များ၏ အရေးပါမှုကို ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်းဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရီယိုဒီဂျေနေရိုးမြို့၌ ကျင်းပသော စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညီလာခံတွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက ထပ်မံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြ သည်။ဒီရေတောများသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များအကြား ဆက်စပ်ပေးသည့် နေရာ တွင် ရပ်တည်လျှက်ရှိပြီး၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများနှင့် အပင်များနှစ်မျိုးလုံးရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်သည့် ဂေဟစနစ်များဖြစ်၍ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲပြီးပါကပြန်လည်တည်ထောင်ရန်ခက်ခဲသည့် ဂေဟ စနစ် ဖြစ်သည်။ ဒီရေတောများမှ ဒေသခံပြည်သူများအသုံးပြုရန်ထင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိသစ်တောဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း နေပြည်တော်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၇
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် သစ်တောသယံဇာတများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပေါကြွယ်ဝ၍ ယနေ့အချိန်အထိနိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၆.၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် သစ်တောများဖုံးလွှမ်းလျှက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့သစ်တောများသည်နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက မဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ပတ်ဝန်းကျင်တည်ငြိမ်ရေး၊ ရာသီ ဥတုမျှတရေးအတွက်လည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင် သစ်တောများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ စွမ်းအင်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပေါ်တွင်လည်းများစွာအထောက် အပံ့ပြုလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သစ်တောများထာဝစဉ်တည်တံ့မှသာလျှင် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝ ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်တို့ ကောင်းမွန်တည်တံ့ပြီးလူမှုစီးပွားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတော်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ Ministry of Climate and Environment တို့အကြား ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် Letter of Intent လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသတင်း (၆-၂-၂၀၁၄၊ နေပြည်တော်)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ Ministry of Climate and Environment တို့ ပူးပေါင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် Letter of Intent လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုယနေ့ နံနက် ၉:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်း ကိုယ်စား ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်မောင် တက်ရောက်ပြီးနော်ဝေနိုင်ငံ Ministry of Climate and Environment ဘက်မှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Lars Andreas Lundeတက်ရောက်သည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောများနှင့် အမျိုးသားဥယျာဉ်တို့ဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများနှင့် စာသင်ကျောင်းများတွင် ပညာပေးဟောပြောပွဲများကျင်းပ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် လူသားနှင့် သဘာဝဝန်းကျင် ညီညွတ်မျှတမှုကိုဖန်တီးပေးသည့် အပြင် လူသားတို့အတွက် အစားအစာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ကြမ်းများစသည်တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာ၀စနစ် ကွဲပြားမှု များပြားသည့်အတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဒေသခံပြည် သူများပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိလာစေရန်နှင့် သိမြင်နိုးကြားမှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးH.E. Ms. Ann Ollestadနှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းအားပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ann Ollestadသည် ယနေ့(၂၀. ၁.၂၀၁၄)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၀၀ ) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။